Man City oo gool madi ah kaga adkaatay Kooxda Burnley misane dib ula wareegtay hogaanka horyaalka Premier league +Sawiro – Gool FM
Inuu ku dhowaaday ku biirista Barcelona, xilligii ay Chelsea dooneysay saxiixiisa, koox kale oo uu sida cad isaga diiday & xagaagii ugu adkaa mustaqbalka Wayne Rooney
Antoine Griezmann oo daaha ka rogay sheekadii dhex martay isaga iyo Lionel Messi markii ugu horreysay ee ay wada kulmeen
Kooxda Manchester City oo aan wax dalab ah ka gudbin doonin Lionel Messi sanadka soo socda… (Maxaa isbedelay?)
Wakiilka ciyaaryahan ka tirsan Kooxda Real Madrid oo xaqiijiyey in xiddigu uu doonayo inuu u dhaqaaqo horyaal kale
Dayot Upamecano ma’ahan kaliya ciyaaryahanka ka tirsan Kooxda RB Leipzig ee diiradda u saaran Manchester United
Pirlo: “Ronaldo tixgelin gaar ah kama helo Kooxda Juventus”
“Messi wuxuu ii sheegay inuu ila jiri doono ilaa iyo geeri” – Griezmann
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Inter Milan ee Champions League… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)
Juventus, Barcelona, Man United, PSG & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartanka Champions League
Man City oo gool madi ah kaga adkaatay Kooxda Burnley misane dib ula wareegtay hogaanka horyaalka Premier league +Sawiro
Bashiir April 28, 2019
( England) 28 Abriil 2019. Kooxda Man City ayaa gool madi ah kaga adkaatay Kooxda Burnley kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league iyaga oona dib ugu soo laabtay hogaaminta horyaalka.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa waxa uu ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan xili kooxda Man City ay ka ciyaar wanaagsanaayeen Kooxda Burnley.
City ayaa sameesay shan isku day oo halis ahaa oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta laakiin uma suurta galin in fursadahaan ay ka faa’ideystaan.
Qeybtii koowaad ee kulan ciyaareedka ayaa lagu kala nastay bar-baro gool la’an ah, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Kooxda Man City ayaa dar darteedii ku soo gashay iyaga oona sii laba jibaaray weerarkooda ugu dambeena waxaa yimid goolka qura ay ciyaarta ku adkaadeen daqiiqadii 63-aad oo waxaa shabaqa gaaray dhaliyaha reer Argentina ee Sergio Aguero.
Burnley ayaa si wanaagsan u daafcaneysay goolkeeda balse waxa ay aad ugu liiteen dhanka weerarka iyaga oona ku guul dareestay in xitaa hal jaanis abuuraan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Burnley iyo Man City ayaa ku soo idlaaday 1-0 xili City ay dib ula wareegtay hogaanka horyaalka Premier league.
Safafka rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo lagu dhawaaqay
Kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo barbaro ku kala baxay, xilli De Gea uu galay qalad kale... + Sawirro